Taunggyi - The Cherry Land: Positive Thinking
ရေးသားသူ Taunggyi - The Cherry Land အချိန် 9:44:00 PM
ဖန်ခွက်ထဲ ရေတ၀က် ပြည့် အောင် ကျွန်တော် တို့ ဘယ်လောက် စောင့်ရသလဲ.. တကယ်ရော တ၀က် ပြည့်ပြီလား.. အကုန်ပြည့်ဖို့ ဆိုရင် ဘယ်လောက် ထပ်စောင့်ရမလဲ.. အကုန်လုံးမှာ တာဝန်ရှိ တာတော့ မှန်ပါတယ် ..ဒါပေမယ့် အရေးကြီးဆုံးက what?
တကယ် ကျွန်တော် ရေးလိုက်တုန်းက ဒီထက်များပါတယ်။ ချန်လှပ်ထားတဲ့ အပိုဒ်တွေရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေ ပြောနေရင်လဲ ဘယ်သူ့ကိုယ်မှ အကျိုးမရှိမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ချန်ခဲ့လိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက Positive Thinking ဆိုတာပါ။
အရေးကြီးဆုံးက အမြင် Vision ပါ။ နောက် အဲ့ဒီ ကလာတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် Work Out ပါ။ နောက်ဆုံး ရလဒ် Result ပါ။
ကောင်းတာကို တွေးနေတဲ့လူတစ်ယောက်က ကောင်းတဲ့ စိတ်အစဉ်ဖြစ်ပြီး။ ကောင်းတာတွေပဲ လုပ်မိမယ်လို့ ဆိုလိုချင်တာပါ။
ဟုတ်ပါတယ်....ကောင်းတာကိုတွေးနေတဲ့လူတစ်ယောက်မှာ ကောင်းတဲ့ စိတ်အစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်.....
လူတိုင်းဒီစိတ်မျိူးရှိဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်တယ်လေ......
ဒါမှလည်းလူဘောင်အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုလုံးဟန်ချက်ညီညီ
တို့ တက်လာမယ်လို့ ထင်တယ်လေ....ကျွန်တော်အမြင်ပါ...အက်တမင်ရေ
ဗုဒ္စရဲံ့ ဆို ဆုံးမမူနဲ့ နေထိုင်သွားနိုင်ရင်..........
Sunday, July 29, 2007 10:57:00 PM
ဟုတ်ကဲ့ ကိုအောင်မိန်းရေ ကျွန်တော်တို့ အခုလို နေတာ အဲ့ဒါပါ။
တရားရှာရင်တော့ အပျက်တွေကို ရအောင်ကြည့်ရမှာပေါ့။ အခုတော့ မြန်မာလူငယ်တွေက တရားသဘောတွေ အမြဲကြားနေရလို့နဲ့ တူတယ်. တွေ့တဲ့ဟာတိုင်းကို အပျက်တွေပဲ မြင်နေကြတာလေ။ အဲ့ဒါက ကျွန်တော်တို့ အတွက် ကြာရင် မကောင်းဘူး။ အဲ့ဒီလို မဖြစ်သင့်တော့ဘူးဗျ။
ကျွန်တော်လဲ တက်နိုင်သမျှ Postitive Thinking ဖြစ်အောင် ကျိုးစားနေရတုန်းပဲ။ စိတ်လေးကလဲ မကောင်းတာပဲ လုပ်ချင်၊ တွေးချင်နေတော့လဲ ခက်သားဗျ။
အခု လူငယ်တွေ ရေးနေကြ၊ တွေးနေကြတာတွေကို တွေ့ရ၊ မြင်ရတာတွေ အားလုံးက စိတ်ကို ညစ်ညူးစေတာတွေပဲ ဖြစ်နေတယ်.. အဲ့ဒါတွေ ဖက်မိရင် စိတ်ကို နောက်ပြီး.. နေလို့ မကောင်းတော့ဘူး.. ကျွန်တော်တို့တွေ လိုအပ်နေတဲ့ အားမာန်တွေ ယုတ်လျော့သွားစေတယ်.. Admin ပြောသလိုပဲ ကောင်းတဲ့ စိတ်တွေ မဖြစ်လာတော့ဘူး.. အဲ့ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ ကောင်းတာ တွေ မလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့.. ဟုတ်တယ် အဲ့ဒီ အတွေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ တတွေ ဖယ်ပစ်ရမယ်...
ဒီ Blog မှာတော့ ကောင်းတာတွေကို ပဲ ဒီထက် တက်နိုင်သမျှ ရေးပေး၊ ဆွေးနွေးပေးရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်.. ဒါမှပဲ စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ အင်အားတွေ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ ရလာမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်..
Sunday, July 29, 2007 11:21:00 PM
ကောင်းပါတယ် . . .